"4 3 2 1", iyo nyowani kubva kumunyori Paul Auster weSeix Barral | Zvazvino Zvinyorwa
«4 3 2 1», iyo nyowani kubva kuna Paul Auster
Isu tanga tatove kutarisira chimwe chinhu chitsva kubva Paul auster, uye kunyangwe zvakatora chinguva kuti zvibude (kune avo vedu vanotevera munyori zvakati rebei uye vanonakidzwa neanenge kuverenga kwake kwese), isu tatova nayo nesu. Ine zita risingawanzo zvirinani: "4 3 2 1", rakaburitswa pasi pe Edhisheni Seix Barral. Tevere, isu tinokuudza iwe zvishoma nezve iri bhuku uye tinokusiya iwe nehurukuro pfupi iyo iyo munyori pachake akapa kune iye muparidzi.
Chokwadi chega chisina kuchinja muhupenyu hwaFerguson ndechekuti akazvarwa musi wa3 Kurume 1947, muNewark, New Jersey. Kubvira panguva iyoyo zvichienda mberi, nzira dzakasiyana dzinovhurika pamberi pake uye dzichamutungamira kuti ararame hupenyu hune hwakasiyana zvachose, kukura uye kuongorora rudo, hushamwari, mhuri, hunyanzvi, zvematongerwo enyika uye kunyangwe kufa munzira dzakasiyana, nezvimwe zviitiko zvine yakaratidza hafu yechipiri yezana ramakore rechimakumi maviri rekuAmerica senge kumashure.
Ko kana iwe waizoita zvakasiyana panguva yakakosha muhupenyu hwako? 4 3 2 1, Novel yekutanga yaPaul Auster mumakore manomwe, mufananidzo unofambisa wechizvarwa chose, a kuuya kwezera zvepasirese uye saga yemhuri inoongorora nenzira inopenya miganho yemukana uye mhedzisiro yesarudzo dzedu. Nekuti chiitiko chese, kunyangwe hachikoshe chingaite, chinovhura zvimwe zvingabvira nekuvhara zvimwe.
Kubvunzana kwaSeix Barral
Mubvunzurudzo: Izvo zvakanaka zvakauya sei?
Paul Auster: Ini handizive. Rimwe zuva ndaive pano mumba mangu uye pfungwa yekunyora nyaya yehupenyu yemumwe mukusiyana, hupenyu hwavo hwakaenzana, yakandirova. Zvakasimuka. Handizive kuti sei uye sei. Handisati ndambokwanisa kutsvaga kwakatangira zano rekuti bhuku. Imwe nguva hapana kana chinhu uye neminiti inotevera une chimwe chinhu ipapo. Handisati ndambokwanisa kuwana iyo nguva kana pasina chinhu chinova chinhu. Zvakangoitika. Chandinogona kukuudza ndechekuti ndaifara kwazvo nezve iyo pfungwa, chiri chinhu chakandibata zvakanyanya. Ndinofanira kutaura, ndakanyora feverishly, zvaiita sekutamba nekutenderera, uye pakanga paine mhando yekukurumidzira pane zvandaiita izvo zvaishamisa.
Mubvunzurudzo: Unoyeuka here zuva rakachinja hupenyu hwako?
Paul Auster: Iri bhuku harisi bhuku rehupenyu hwevanhu, kwete. Asi pane chokwadi chiri maari chinoenderana nechimwe chinhu chakaitika kwandiri, pachangu, pandaive nemakore gumi nemana ekuberekwa. Zvakaitika pandakanga ndiri mukamba yezhizha uye boka revakomana, takakomberedza makumi maviri edu, takapinda musango kuti tikwire tikabatwa mukutinhira kunotyisa. Uye tichida kubva kumwaranzi, takapinda musango rakavhurika, kujekesa. Kuti tiuwane, taifanira kukambaira pasi pecheni-yekubatanidza fenzi. Ipapo takaenda tisina faira, rimwe nerimwe, pasi pefenzi. Paive nemukomana pamberi pangu, ndinoreva padhuze zvekuti tsoka dzake dzaive inches kubva kumeso kwangu. Uye paakanga achipfuura pasi pecheni, mheni yakarova, ikamuuraya ipapo. Uye ndinofunga ndicho chinhu chakasimba kupfuura zvese chandati ndamboona. Ona mukomana kufa ipapo ipapo. Icho chinhu chakanditambudza hupenyu hwangu hwese. Uye bhuku iri, ndinofunga, rinobuda muchiitiko ichocho. Saka chimwe chinhu chandakatakura neni kubvira ndaive nemakore gumi nemana ekuberekwa.
Paul Auster: Pakave nedzimwe nguva dzakakosha muhupenyu hwangu. Ini ndinofunga tsaona yekutsvaga mukadzi wangu, Siri Hustvedt, ndiyo inonyanya kukosha. Uye zvakangoitika netsaona. Dzimwe nguva ndinofunga kuti chii chaizoitika kwandiri dai tisina kusangana nenzira iyoyo. Hwangu hupenyu hwaizove hwakasiyana sei? Neizvi handireve kuti mukana unotonga zvese. Tine rusununguko rwekusarudza, tine rusununguko rwekusarudza nekuita sarudzo. Isu zvakare tine zvisungo uye zvido zvekugutsa. Asi izvo zvatinofanira kugara tichiita, kuva akatendeseka nezviri hupenyu, kunzwisisa nekugamuchira kuti izvo zvisingatarisirwi zvinogara zviri chikamu chejira rehupenyu.
Mubvunzurudzo: Nhoroondo nezve hupenyu.
Paul Auster: Saka ini ndakatanga kufunga kuti sei ndaifungisisa pamubvunzo uyu, chii chinonzi autobiographical mubhuku uye chii chisiri. Zviripachena, zvese zvinomuka kubva mukufungidzira kwako zvinofemerwa nerako ruzivo. Asi, semuenzaniso, kana iwe uine hunhu munganonyorwa yako uyo anosvuta fodya uye iwe wakamboputa midzanga zviuru gumi muhupenyu hwako, ndizvo zvehupenyu kana kwete? Uye chero zvazviri, iyo crux yenyaya yacho ingano. Kunyangwe iwe ukaisa izvo zvinonzi "chokwadi chaicho" munoverengeka, vanova vekunyepedzera, vanova chikamu chengano. Ini ndinofunga chingave chisiri kududzirwa kuona iro bhuku serudzi rwemumvuri autobiography. Hazvina kudaro. Hazvina zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » «4 3 2 1», iyo nyowani kubva kuna Paul Auster
_Sango rekristaro_. John McClaine anova anonakidza (uye ndima).